Rikoorada laga Diiwaan galiyay Maalinta u dambeysa kulamada Horyaalka Premier League. – Gool FM
( Premier League) 13 Maajo 2018. Kal cayaareedka horyaalka Premier League 2017-18 ayaa soo dhamaaday, iyadoo ay horyaalka ku guuleystay kooxda Manchester city markeedii seddaxaad.
Kulamadii 38-aad ayaa usoo idlaaday waxaana laga diiwaan galiyay rikooro cajiib ah.
Man City ayaa badisay 32 ciyaar kulamadeeda xagaaga 2017-18 – waa guushii ugu badneed oo ay koox ka sameyso hal xili cayaareed horyaalka.
Waa markii ugu horeysay xirfadiisa uu 100 dhibcood ku qaado hal horyaalka Pep Guardiola iyo City oo noqotay naadigii ugu horeyay ee 100 dhibcood ku hanta horyaalka Premier League.
Tani waa markii ugu horeysay oo horyaalka Premier League ay laba cayaariyahan ka dhaliyaan 30 gool waana Salah iyo Kane tan iyo 1993-94 oo ay Andy Cole 34 gool , Alan Shearer 31 gool ay gaareen goolasha Sodonleyda.
Marko Arnautovic ayaa dhaliyay 11 gool xili cayaareedkan horyaalka Premier League waa xiddigii ugu badnaa ee hal xagaa goolashaas u dhaliyaa kooxda West Ham tan iyo Bobby Zamora kal cayeerkii 2006-07 oo dhaliyay 11 gool.
Mohamed Salah waa cayaariyankii u horeyay ee Liverpool ah kasoo ay laba jibaarmeen goolashiisa iyo caawintiisa tan iyo labada cayaaryahan ee Luis Suarez (31 gool & 12 caawin) iyo Steven Gerrard (13 gool & 13 caawin) 2013-14, Salah 32 gool iyo 10 caawin.
Peter Crouch goolkii madaxa ahaa uu dhaliyay waa goolkii 1000 (kumaad) ee xagaagn ka dhasha horyaalka Premier League.
Mo Salah ayaa gool ka dhaliyay 16 kooxda xagaagan horyaalka Premier League; majiro cayaariyan ebid goolashaad hal xili cayaareed ka dhaliyay horyaalka.